Olona miisa 50 000 farafahakeliny no handray anjara amin’ny tetik’asa ho fametrahana vahaolana mifandraika amin’ny sakafo ara-pahasalamana mba hanatsarana ny fahasalamany sy ny an’ny taranaka ho avy.
Fanambara an-gazety iombonana
Alakamisy 5 aogositra 2021, Madagasikara/Ambositra – Ny Governemanta Japoney, ho fanohanana ny Governemanta Malagasy, androany dia nanokatra ny tetik’asa ho fanatsarana ny lafiny ara-tsakafo amin’ny alàlan’ny fomba fiasa mahasehaka sehatra maro samihafa any Amoron’i Mania. Apetraka amin’ireo ivon-toerana telon’ny Firenena Mikambana (UNICEF, PAM, FAO), izay hampivondrona ny fahaiza-manaon’izy ireo eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny fanatanterahana ity tetik’asa ity, ho fandraisana anjara amin’ny fampihenana ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo lalina any amin’ny faritra iray izay tena iharan’ity aretina misoko mangina eto Madagasikara ity.
Amoron’i Mania dia manana taha 55%-n’ireo zaza latsaky ny dimy taona izay tratry ny tsy fahampian-tsakafo mahery vaika. Hisy fiantraikany ratsy amin’ireo olona izay ianjadiany ity endrika tsy fanjarian-tsakafo ity, satria tsy ho afaka hampiasa amin’ny fahafenoany ny heriny ara-batana sy ara-tsaina intsony izy ireo. Midika izany fa tsy ho afaka hanana fiainana matihanina feno fahavitrihana intsony ireo olona ireo, ary tsy ho afaka handray anjara amin’ny fampandrosoana ny toe-karen’ny tanindrazana mihitsy, fa kosa ho tonga enta-mavesara ho an’ny firenena.
« Resy lahatra izahay fa ny ezaka iarahan’ireo sehatra misahana ny ara-tSakafo, ny Fanabeazana, ny Fambolena, ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana dia hanampy amin’ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafon’ny vondrom-piaraha-monina izay iantefan’ity tetik’asa ity. Ny UNICEF dia hampifantoka ny ezaka ataony rehetra ho amin’ny fanatsarana ny fepetra hahazoana misitraka tolotra sy foto-drafitr’asa momba ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana; ary koa ho amin’ny fanohanana ireo vondrom-piaraha-monina sy ireo andrim-panjakana kendrena mba handray an-tànana ny toe-javatra ianinan’izy ireo eo amin’io sehatra io », hoy Michel Saint-Lot, Solotena Maharitry ny UNICEF eto Madagasikara.
« Ny fanohanana ireo mpianatra sy ny ankizy rehetra amin’ny ankapobeny, amin’ny alàlan’ny fanomezana sakafo manome hery eny anivon’ireo toeram-pisakafoanana eny anivon’ny sekoly, dia tsy hoe hanatsara ny voka-panadinan’izy ireo ihany, fa indrindra indrindra hampivelatra ny heriny ara-batana sy ara-tsaina, » hoy ny filazan’i MouminiOuedraogo, Solotenan’ny PAM eto Madagasikara. « Amin’ny farany dia i Madagasikara manontolo no hivoaka mpandresy satria ireo ankizy tsara sakafo dia ho lasa mponina afaka hiasa, ka hivadika ho tombony ho an’ny firenena ».
Ho an’i Charles Boliko, Solotenan’ny FAO eto Madagasikara, any Comores, Maurice ary Seychelles, « Ny fiompanana amin’ny kalitaon’ny hery entin’ny sakafo ho an’ny mponina dia mbola mijanona ho fototry ny fampandrosoana sy ny ho avin’ny firenena. Ny mponina ampy sakafo sy salama tsara dia havitrika kokoa ary hamokatra bebe kokoa ho an’ny toe-karena; fampitahana tsotra izany. Ny fizaràna fahalalàna amin’ny alàlan’ny fampitam-baovao, ny fanabeazana ary ny fifandraisana ho an’ny fanovàna fitondran-tena dia endrika iray lehibe isehoan’ny fampiharana ity tetik’asa ity, mba hahatonga ny olona kendrena tsirairay handray anjara feno amin’ny fanovàna mihabo ny fiainany, amin’ny lafin’ny fanatsarana ny fomba fisakafo sy ny fahazarana mba hahatomombana ireo sakafo eo amin’ny rojom-pihariana ao anatin’ny sehatry ny fambolena ».
« Ny Governemanta Japoney dia feno fahavononana amin’ny fanohanana ny fampandrosoana tsy mitanila sy tsimialonjafy eo amin’ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toe-karena eto Madagasikara ; indrindra eo amin’ny sehatry ny fambolena, ny foto-drafitr’asa, ny fanabeazana ary ny fitsaboana. Ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo rahateo dia ao anatin’ny politikan’ny fiaraha-miasanay amin’i Madagasikara, » araka ny nambaran’i HIGUCHI Yoshihiro, Ambasadaoron’i Japana eto Madagasikara. « Indrindra indrindra ihany koa eo amin’ny fisorohana ny aretina Covid-19, dia zava-dehibe ny fananana sakafo voalanjalanja sy feno hery mba hanamafisana ny hery fiarovan’ny tsirairay, » hoy hatrany izy.
Ny « hanohanana miafina »
Ny tsy fahampian-tsakafo lalina na ny « hanohanana miafina » izay mahatonga ny fahataràn’ny fitomboana, ary hita taratra amin’ny hakelin’ny zaza mihoatra amin’ny taonany, dia mahatonga fahavoazana ratsy eo amin’ny fiasan’ny ati-doha sy ny fivelaran’ny taova ary ny hery fiarovan’ny zaza. Aorian’ny 1000 andro voalohany iainan’ny zaza dia tsy misy azo atao intsony ny amin’io tranga io ( hatramin’ny andro niforonany tao an-kibon-dreniny ka hatramin’ny faha-roa taonany).
Mandritra io 1000 andro voalohany io dia antony maro samihafa no mahatonga ny fahataran’ny fitomboan’ny zaza, ao anatin’izany ny sakafo tsy voalanjalanja sy tsy maro karazana, indrindra ho an’ny reny sy ilay zaza; ny fahazaran-dratsy eo amin’ny fikarakarana ny zaza; ny tsy fahampian’ny rano sy ny fitsaboana; ary ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fomba fidiovana.
Eto Madagasikara, mifanohitra amin’ny tokony ho izy, ny taha ambony indrindra amin’ny fahataran’ny fitomboana (eo anelanelan’ny 44% sy 60%) eo amin’ny zaza latsaky ny 5 taona dia hita any amin’ireo lemaka avo toerana izay ahitana tahan’ny voka-pambolena ambony indrindra, toa an’i Vakinankaratra, Itasy, Analamanga ary Amoron'i Mania. Betsaka kokoa ny fahataran’ny fitomboan’ny zaza any ambanivohitra, eny anivon’ireo tokantrano ahitana fidiram-bola kely sy loham-pianakavana tsy nandia fianarana.
Vahaolana iray ho an’ny sehatra marolafy
Ity tetik’asa mitetina 1,37 tapitrisa dôlara, novatsian’ny Governemanta Japoney vola ity dia hiompana indrindra amin’ny fidirana an-tsehatra eo amin’ny lafiny ara-tsakafo, sy ny fitantanana ary ny fifandraisana, mba hampihenana ny tsy fahampian-tsakafo lalina. Olona miisa 50 000 farafahakeliky, izay ahitana vehivavy bevohoka miisa 2 500 eo ho eo, sy zaza latsaky ny roa taona miisa 5 000 no hiantefan’ireo fandraisan’andraikitra maharitra marolafy mifandraika amin’ny lafin’ny ara-tsakafo. Ny tanjona amin’izany dia ny hanatsarana ny fahafaha-misitraka sakafo voalanjalanja sy ampy tsara na eo amin’ny habetsany na ny kalitaony ho an’ireo fianakaviana marefo, ary koa ny mba hampiroboroboana ny sakafo zaraina any an-tsekoly mifototra amin’ny vokatry ny fambolena eny an-tsekoly na ny zaridainan-trano, ka hahafahana misitraka ny tetik’asa WASH mba hiarovana sy hitandrovana tontolo iainana mahasalama ho an’ireo vondrom-piaraha-monina. Zava-dehibe ny fahafahan’ny rehetra misitraka rano fisotro madio satria io no loharanon’aina. Amin’ny fiahiany ny andavanandrom-piainan’ny vehivavy sy ny filàn’ny zaza indrindra indrindra, ity tetik’asa ity dia hitondra ny vahaolana fototra amin’ny fidinana ifotony ho famahana ity olana ity.
Etsy andanin’izany fidirana an-tsehatra izany, ity tetik’asa ity dia hampiroborobo ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo fandaharan’asa hafa izay efa eo an-dalam-panatanterahana eo anivon’ny faritra, anisan’izany ny tetik’asa nahazo famatsiam-bola avy amin’ny JICA (PASAN, PAPRIZ, TAFITA, sns.) sy ireo mpiara-miombon’antoka hafa ho an’ny fampandrosoana.
Ankoatra ireo fandraisan’andraikitra marobe nolazaina nandritra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena ho Fampandrosoana an’i Afrika (TICAD) sy hetsika lehibe maro hafa, ny Governementa Japoney dia anisan’ireo mpanentana ny hetsika ho amin’ny antoka sy fahatomombanana ara-tsakafo any Afrika (IFNA), izay mikendry ny famporisihina ireo governemanta afrikana mba hanatanteraka politika sy fandaharan’asa mahakasika ny sakafo mahavelona sy ny fahatomombanana ara-tsakafo. Anisan’ireo tompon’andraikitra amin’ny fiaraha-mientana ho fampiroboroboana ny fambolem-bary eto Afrika (CARD) ihany koa ny Governemanta Japoney; hetsika izay nahafahana nampitombo ny famokarana vary ho 74% teto Afrika nanomboka tamin’ny taona 2008, niaraka tamin’ny fanampian’ny traikefa sy ireo teknolojia maro ary ny famatsiam-bola Japoney.
Ity tetik’asa ity dia mifanaraka tsara amin’ny fandaharan’asa eo amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (PSAEP), amin’ny MadaMadio 2025 sy ny PNAN-III. Mifanaraka tanteraka amin’ireo drafitra sy paikady eo amin’ny sehatra maro eto amin’ny firenena ireo fidirana an-tsehatra naroso, indrindra eo amin’ny lafiny ara-tsakafo, ny fambolena, ny rano,ny fanadiovana sy ny fidiovana. Ireo ministera rehetra voakasika mivantana amin’ny fitantanana ity tetik’asa ity dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fomba fiasa marolafy mba ho famongorana ny tsy fanjarian-tsakafo, ary manamafy ny fandraisan’anjaran’ny tetik’asa amin’ny Veliranon’ny Filoham-pirenena.
Araka ny valin’ny fanadihadiana vonjimaika avy amin’ny dinika nasionaly voalohany momba ny sehatry ny sakafo eto Madagasikara, izay natolotra nandritra ny Fihaonana an-tampon’ny Firenena Mikambana momba ny Sakafo tany Roma ny 27 Jolay lasa teo, dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny fomba fijerin’ny firenena ity tetik’asa ity mba:
Hanamafisana ny paikady fanovàna ny fitondran-tena amin’ny fihinanana sakafo ampy sy maro karazana ary feno hery ;
Hampiroboroboana ny fomba fiasa tsimialonjafy sy marolafy ;
Hanohizana ny ezaka famokarana mahomby manoloana ny fiovaovan’ny toetany amin’ny alàlan’ny fiantohana ny faharetan’ny harena voajanahary.
02 Jolay 2021
45 tapitrisa NOK hanalefahana ny fiantraikan’ny krizin’ny maha-olona eo amin’ny fanabeazana ny ankizy any atsimon’i Madagasikara